पोर्चुगल जान अनुमति छ कि छैन र जान कति खर्च लाग्छ ?
Sun, Aug 09, 2020 | 22:45:35 NST
Total Hits: 9.9 K
प्रकाश श्रेष्ठ र सरगम सागर याक्थुङ्बा
प्रश्न : पोर्चुगल जान कति खर्च लाग्छ ? यसको प्रक्रिया कहाँबाट कसरी अगाडी बढाउनु सकिएला ?
उत्तर : दिवश आचार्य निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग – पोर्चुगल जान नेपाल सरकारले पनि संस्थागत रुपमै अनुमति दिएको मुलुक हो ।
व्यवसायीहरुले विभागसँग पूर्व स्विकृती लिएर विज्ञापन प्रकाशित गरेका हुन्छन् । यहाँहरुले विज्ञापनमा उल्लेख भएअनुसार आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको कामका लागि जान सक्नुहुन्छ । यसको लागत खर्छ ६५ हजार हो । यसमा टिकट खर्च समावेश हुँदैन यहाँहरुले विज्ञापन हेरेर अघि बढ्न सक्नु हुन्छ ।